तारा एयरकाे बिमान दुर्घटना भयो : को को छन् त बिमानमा सवार ? | MYAGDINEPAL
Home / समाचार / तारा एयरकाे बिमान दुर्घटना भयो : को को छन् त बिमानमा सवार ?
तारा एयरकाे बिमान दुर्घटना भयो : को को छन् त बिमानमा सवार ?
आज (बुधबार) विहान विमान पौने आठ बजे पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको नाइन एनएचएच ट्वीनअटर सम्पर्कविहिन विमान म्याग्दीको रुप्सेमा दुर्घट्ना हुन पुगेको छ ।
खराब मौसमका कारण विमान दुर्घट्ना भएको भएको बताइएपनि वास्तविक कारण खुल्न सकेको छैन ।
स्थानीय बासीले विमान डाँडामा ठोक्किएर दुर्घटना भएको बताएका छन् । विमान दुर्घटना हुनु अघि ठूलो आवाज सुनिएको र आगोको मुस्लो देखिएको स्थानीयले टेलिफोनमा जानकारी दिएका हुन् । पोखरा विमानस्थलबाट आज बिहान (बुधबार) बिहान ७ बजेर ४७ मिनेटमा जोमसोमको लागि उडेको थियो ।
पोखरा विमानस्थलका अनुसार म्याग्दीको घोडेपानीसम्म सम्पर्कमा रहेको र त्यसपछि सम्पर्क बिहीन भएको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार रुप्सेको डाँडामा ठूलो आवाज आएपछि धुँवा आएको देखिएको थियो । त्यसपछि स्थानीयबासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । स्थानीयको खबरलगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय दानाबाट प्रहरी घटनास्थलतर्फ गइरहेको छ
को को परे ?
विमानमा डोल्मा छिरिङ शेर्पा, राजकुमार तामा, कमला थकाली, म्याक्सु वाइन्जी(विदेशी), लेप्सा लामा, बालकृष्ण निउरे, कान्छा परियार, फेन्जोक गुरु, लक्ष्मी हिराजन, बालक, मोतीबहादुर केसी, पवित्रा केसी, कृष्णलाल भट्टचन, दिलकुमार गौचन, देवीजंग जुरुङ, रेवती बराल, मुक्तिनाथ बास्तोला, विनता भट्टचन, रलरसीद अहमद(विदेशी) र एक बालक, चालक रोशन मानन्धर, विकेश नेमु सवार रहेका रहेका थिए ।
पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरका म्याग्दीको दाना गाविसमा दुर्घटना भएको भनेर स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका इन्सपेक्टर लोकेन्द्र सिंह गुरुका अनुसार रुप्से छहरा भन्दा माथी खसेको भन्ने जानकारी बमोजीम प्रहरी टोली घटनास्थल भनिएको क्षेत्र तिर लागेको छ ।
त्सयस्तै शसस्त्र प्रहरीका डिआइजी नरेन्द्रकुमार सिंहले दिएको जानकारी अनुसार आसपासका जिल्लाबाट समेत त्यसतर्फ टोली परिचालन गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको टोली पनि दाना गाविस तर्फ लागेको छ । यद्यपी दुर्घटनाको पुष्टि भने भइनसकेको डिआईजी सिंहले बताए ।
यसैगरी नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले पनि म्याग्दीमा विमान दुर्घटना भएको खबर आएपछि हेलिकोप्टरसहित टोली गएको बताए ।
पोखरावाट जोमसोम लागि उडेको कल साइन 9NAHH भएको तारा एयरको जहाज बुधवार बिहानवाट सम्पर्क बिहीन भएको छ ।
पोखरा बिमानस्थलवाट बुधवार बिहान सात बजेर ५० मिनेटमा जोमसोमकालागि उडेको जहाज सम्पर्क बिहीन भएको पोखरा बिमानस्थलका अधिकृत कासीराम पौडेलले जानकारी दिए ।
आठ बजेसम्म सम्म घोरेपानी एरियामा सम्पर्कमा रहेको जहाज त्यसपछि सम्पर्कमा आएको थिएन । जहाजमा चालकदलका तीन सदस्य सहित २० जना सभार थिए ।